प्रचण्डको ‘बिहेभोज’ खाने भन्छन्- प्रतिक्रिया दिन गाह्रो छ – " कञ्चनजंगा News "
प्रचण्डको ‘बिहेभोज’ खाने भन्छन्- प्रतिक्रिया दिन गाह्रो छ
No Comments on प्रचण्डको ‘बिहेभोज’ खाने भन्छन्- प्रतिक्रिया दिन गाह्रो छ
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ललितपुरको सुनाकोठीमा विहीबार भव्य समारोहवीच पञ्चैबाजाको धूनमा विवाहको ५० औं वर्षगाँठ मनाए । प्रचण्ड दम्पतीले हरियो दूबोको माला लगाएको र छेऊमा पञ्चैबाजा घन्किएको सुन्दा परम्परागत विवाहकै झल्को आउँथ्यो ।
प्रचण्ड दम्पत्तिको यो ५० औं वर्षगाँठ विशुद्ध पारिवारिक कार्यक्रम मात्रै हो कि सार्वजनिक चासोको कार्यक्रम हो ? यसबारे सामाजिक सञ्जालमा बहस र टीकाटिप्पणी सुरु भइसकेको छ । प्रचण्ड र सीता दाहालको पुनर्विवाह हुन लागेको समाचार यसअघि नै केही मिडियामा आइरहेका थिए ।
विशेष गरी छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि आमा सीता दाहाल विक्षिप्त बनेकी छिन् । उनी पुत्र वियोगमा विक्षिप्त मात्रै बनेकी छैनन्, विभिन्न रोगहरुको आक्रमणले निकै नै कमजोर बनेकी छिन् । अमेरिका लगेर उपचार गर्दा पनि उनको शरीर गल्न छाडेको छैन । यसरी मानसिक एवं शारीरिकरुपमा थकित बनेकी सीताको मन बहलाउनका लागि यस्तो समारोह गर्नुपरेको पारिवारिक स्रोतको भनाइ छ । बिहीबार कार्यक्रममा प्रचण्डले आफ्नी बिरामी पत्नी र परिवारजनको ईच्छाअनुसार यस्तो कार्यक्रम गरिएको सबैलाई जानकारी दिएका थिए ।
प्रचण्ड परिवारको यो तर्कलाई मान्ने हो भने यो समारोहलाई नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई व्यक्तिगत र पारिवारिक विषयमात्रै मान्ने पक्षमा सामाजिक सञ्जाल छैन । देश हाँक्ने नेताले गर्ने सामाजिक व्यवहार आम जनताका लागि उदाहरणीय एवं पदचाप पछ्याउने किसिमका हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि बहस छेडिएका छन् । अझ सर्वहारा वर्गको कम्युनिष्ट नेताले त झनै यसरी विवाहको वर्षगाँठ मनाउनु प्रगतिशील संस्कारभित्र पर्दैन र सामन्ती राजा महाराजाले अवलम्वन गर्ने संस्कारजस्तो देखियो भन्ने प्रतिक्रियाहरु पनि आउन थालेका छन् ।
सीता दाहालको अवस्था हेर्दाखेरि निकै क्रिटिकल देखिन्छ । त्यसैले केही भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । त्यहाँ सीताको अवस्था कमजोर देखिन्थ्यो । हामी जमघट भएपछि उहाँलाई अलिअलि हौसला भयो ।
← रवीन्द्र अधिकारीले देखेको सपना पूरा गरेरै छोड्छु- राजकुमार क्षेत्री → आजको राशिफल: वि.सं. २०७६ वैशाख २७ गते सुक्रबार